SundaySermons.online: November 2018
ကျမ်းစာထဲတွင် ခါနန်ပြည်ကို သွားရောက်လေ့လာခဲ့သော သူလှျို (၁၂) ယောက် အကြောင်းကို တွေ့ခဲ့ရပြီး သူတို့ ပြန်လည် ပြောကြားကြသော အကြောင်းအရာ များကို လည်း ကျွန်ုပ်တို့ သိရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့ အထဲတွင် (၁၀) ယောက်က အနှုတ် လက္ခဏာ ဆောင်သော သတင်းများကို ပြန်လည် ပြောပြခဲ့ကြပြီး အခြားသော နှစ်ယောက် မှာမူ အပေါင်း လက္ခဏာ သတင်းစကားများကို ပြန်လည်ပြောပြကြသည်။ ထိုသူနှစ်ယောက် မှာ ယောရှုနှင့် ကာလက်တို့ နှစ်ယောက် ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ လူ (၁၀) ယောက်မှာ ဣသရေလလူမျိုးများကို ခွန်အားပေး တိုက်တွန်းရ မည့်အစား စိတ်ပျက် အားလျော့ စေမည့် စကားများကိုသာ ပြောဆိုခဲ့ပြီး ကြားရသူများက လည်း ဘုရားသခင်၏ ကတိ စကားထက် ထိုသူတို့၏ စကားများကိုသာ ယုံကြည်ခဲ့ကြခြင်း ဖြင့် အသက်ရှင်သော ဘုရားသခင်ကို ကျောခိုင်း ခဲ့ကြသည်။
ထိုသူတို့၏ မနာခံခြင်းနှင့် ဘုရားသခင်ကို အားကိုးခိုလှုံမှု မရှိခြင်းတို့ကြောင့် ရက် (၄၀) နှင့် ခါနန်ပြည်သို့ ရောက်နိုင်သည့် ခရီးကို နှစ်ပေါင်း (၄၀) သွားရခြင်းဖြင့် ဘုရားသ ခင်က ဒါဏ်ခတ်တော်မူခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ထိုအချိန်က ရှိခဲ့သောသူအများ စုသည် ခါနန် ပြည်ကို ၀င်ခွင့် မရတော့ဘဲ သူတို့၏ သားမြေး များကသာ ကာလက်နှင့် ယောရှုတို့နှင့် အတူ ကတိတော်နယ်မြေ ခါနန်ပြည်သို့ ၀င်ခွင့်ရရှိခဲ့လေသည်။
ယခင်က ရှိနှင့်ခဲ့သော အာမလက်လူများကိုပင် ယခုလည်း ရင်ဆိုင်ကြရသည်။ သို့ သော် ယခု အခါ တွင်မူကား ယခင် ကဲ့သို့မဟုတ်။ ယောရှု၊ ကာလက်တို့နှင့်အတူ မျိုးဆက် သစ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ကတိတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ရန်သူအာမလက်များကို တိုက် ခိုက်ခဲ့ကြသည်။ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ယေရိခေါမြို့ကြီး ခုရက်တိုင်တိုင် ပတ်ခဲ့သည်။ ယေရိခေါ မြို့ ရိုးကြီး ပြိုလဲသွားသည်အထိ ယုံကြည်ခြင်း အား ကြီးခဲ့ကြသည်။ ဘုရားသခင်၏ နောက် ကို လုံးလုံးလိုက်သော ဤမျိုးဆက်ကို ဘုရား သခင်က အောင်မြင်ခြင်း၊ အောင်မြင်ခြင်း ဆက် တိုက် ရရှိခံစားစေခဲ့သည်။ ရန်သူ၏ နယ်မြေအများစုကို သိမ်းပိုက်ကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ သော် လည်း ဆက်လက်၍ တိုက်ပွဲဝင်စရာ နေရာတွေ ရှိနေ သေးသည်။ သူတို့လူမျိုး (၁၂) နွယ်စလုံး နေစရာ၊ စိုက်ပျိုးစရာများ အတွက် ဆက်လက် တိုက်ပွဲ ၀င်ရဦးမည်ဖြစ်သည်။
ယခုပြောလိုသည်မှာ ကာလက်နှင့် ပတ်သတ်သော အပိုင်းများကို ပြောဆိုတင် ပြ လို ပါသည်။ ကာလက်၏ အကြောင်းကို ယောရှု ၁၄း၆-၁၄ တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
အကျွန်ုပ်နှင့် အတူသွားသော ညီအကိုတို့သည် လူများစိတ်ပျက်စရာကို ပြုသော်လည်း၊ အကျွန်ုပ်သည် ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား နောက်တော်သို့ လုံးလုံးလိုက် ပါ၏။ ထိုနေ့ ရက်၌ မောရှေက သင်သည် ငါ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား နောက်တော်သို့ လုံးလုံးလိုက် သောကြောင့် အကယ်၍ သင်နင်းပြီးသောမြေသည် အစဉ်အဆက် သင်၏အမွေ၊ သင်၏ သား မြေးတို့၏အမွေ ဖြစ်ရလိမ့်မည်ဟု ကျိန်ဆိုလေ၏။ (ယောရှု ၁၄း၈-၉)
အထက်ပါ ကျမ်းပိုဒ်သည် ကာလက်အတွက် အိပ်မက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုနှုတ် ခပတ်တော်ကို ရရှိ ခံစားပြီးချိန် မှစ၍ ဘုရားသခင် ပေးမည့် နယ်မြေနှင့် ပတ်သတ်ပြီး စိတ်ကူး ယဉ်စရာ၊ အိပ်မက် ရူပါရုံ တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုအရာ အတွက် အချိန်မည်မျှ ကြာသည် ဖြစ်စေ ထိုအိပ်မက်မှာ ပျောက်ဆုံး သွားခြင်း ပျက်ပြယ်သွားခြင်း မရှိခဲ့ပါ။
တမန်တော်ရှင်ပေါလု၏ ရဲရင့်ပြက်သားသော ရူပါရုံအိပ်မက်မှာ တစ်လောကလုံး ဧ၀ံဂေလိသတင်းစကား ကြားနာခွင့် ရရှိလာရန်ပင်ဖြစ်သည်။ ညှင်းပန်း နှိပ်စက်မှုများ ရှိနေ သည့်တိုင်အောင် သူ၏ အိပ်မက် ရှုပါရုံမှာ ပျောက်ပျက်သွားခြင်း မရှိချေ။
မာတင်လူသာ၏ အိပ်မက်မှာ ယေရှုခရစ်တော်၏ ကယ်တင်ခြင်း ကျေးဇူးတော်ကို လူတိုင်း လွတ်လပ်စွာ ဟောပြောခွင့် ရရှိရေးပင်ဖြစ်တော့သည်။ လူတိုင်းသည် ဘုရားသခင် ၏ နှုတ်ခပတ်တော်ကို နားလည် နိုင်အောင် လူတိုင်း ဖတ်ရှုလေ့လာ နိုင်ရေးပင် ဖြစ်တော့ သည်။ သူမသေမီမှာပင် သူ၏နိုင်ငံမှ သန်းနှင့် ချီသော လူများသည် နှုတ်ခပတ် ကျမ်းစာကို ဖတ်ရှုနိုင်ခဲ့လေသည်။
၁။ မိမိ၏ ဆန္ဒများအတွက် အသက်သိတ်ကြီးသွားပြီဆိုတာ မရှိပါ။
ယောရှု ၁၄း၁၀-၁၁ ကိုကြည့်လျှင် အသက် ရှယ်ဆယ့်ငါးနှစ်ရှိပြီ ဖြစ်ကြောင်း ပြော ကြားထားပြီး ခွန်အား များလည်း ရှိနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ လူတို့သည် အ သက် ခြောက်ဆယ်ကျော် ခုနှစ်ဆယ် ရောက်လျှင် အားနည်းသွားသည်။ လုပ်နိုင်သည့် စွမ်း ရည်များ လျှော့နည်းသွားသည်။ သို့သော်လည်း ကာလက် အတွက် ခွန်အားတွေ ရှိနေဆဲ၊ အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည် ဖော်ရန် အားရှိနေဆဲဟု ဖေါ်ပြထားပါသည်။
ကာလက်သည် ၄၅ နှစ်ခန့် ကြာခဲ့ပြီ ဖြစ်သော်လည်း သူ၏ရူပါရုံမှာ အိပ်မက်များမှာ ပျောက် ပျက်မသွားခဲ့ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုအိပ်မက်မှာ ဘုရားသခင်ကိုယ် တော်တိုင်က ပေးထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
(၂) ဆန္ဒရှိနေရင် ဘုရားသခင်က ဘယ်တော့မှ ဆွဲနှုတ်သွားမည်မဟုတ်ပါ။
ယောရှု ၁၄း၁၁ အရ ကာလက်သည် ခွန်အားများ ရှိနေဆဲဟု ပြောဆိုသည့် ကျမ်း ပိုဒ်ကို သင်ကိုယ်တိုင် ခံစားကြည့်ပါ။ ထိုစစ်ပွဲကို ၀င်ရောက် တိုက်ခိုက်ရန်အတွက် မည်သည့် ပြဿနာမျှ ကာလက်တွင်မရှိပါ။ သင်၏အသက် ၈၅ နှစ်အရွယ်တွင် ထိုသို့ ပြောဆိုနိုင် သည့် အခြေအနေ ရှိပါဦးမည်လား။ ကာလက်၏ ရူပါရုံအိပ်မက်သည် ဘုရားသခင်ထံမှ တိုက်ရိုက် ရရှိထားခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် ဘုရားသခင်က ခွန်အား များနှင့် စွမ်းရည်များကိုပါ တစ်ပါတည်း ပေးထားသည် အသက်ကြီး လာသော်လည်း လျော့ပါးသွားခြင်း၊ ခွန်အားနည်း သွားခြင်းတို့ မရှိခဲ့ချေ။
ယခင် အနှစ်လေးဆယ်က ရှိခဲ့သော အာနကလူကြီးများသည် ထိုနေရာတွင် ရှိမြဲရှိ နေသော်လည်းဘဲ ကာလက်၏ စိတ်နှလုံးကို ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ ယနေ့ ကျွန်တော် တို့၏ အသက်တာတွင် အာနကဟူသော လူ့ဘီလူကြီးများက သင်၏အိပ်မက် ရူပါရုံများကို ဖျက်ဆီးပစ်ရန် ကြိုးစား အားထုပ်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော် သင်၏ရူပါရုံသည် ဘုရားသခင်ပေး ထားသော စစ်မှန်သော အိပ်မက် ရူပါရုံများဖြစ်ပါက သင့်ကို မည်သို့မျှ အနှောက်အယှက် မဖြစ်စေနိုင်ပါ။ သင့်ကို ဘုရားသခင်က ခွန်အားများနှင့် ရစ်ပတ်ပါလိမ့်မည်။ သင်သည် ဖိလ္လိပိ ၄း၁၃ အားဖြင့် ပြန်လည်ကြွေးကြော်ပါလိမ့်မည်။ “ငါ့ကို ခွန်အားနှင့် ပြည့်စုံစေတော် မူသော ခရစ်တော် အားဖြင့် ခပ်သိမ်းသောအမှုတို့ကို ငါတတ် စွမ်းနိုင်၏” ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။
ကာလက်သည် ဟေဗြန်နယ်ကို သိမ်းပိုက်ရန် ကြိုးစား ပြင်ဆင် ခွန်အားယူနေ သည့် နည်းတူ၊ သင်သည် အစီအစဉ်တစ်ခု၊ လုပ်ငန်း အသစ်တခု လုပ်ဆောင်တော့မည် ဆိုလျှင် ထိုအရာသည် သင့်အတွက် နယ်မြေ အသစ်တစ်ခုပင် ဖြစ်ပေသည်။ ကျွန်တော်တို့ သည် အချိန်မရွေး ကျဆုံးနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့သည် မစုံလင်သောသူများ ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် အလုပ်တာဝန် အသစ်များအတွက် ဆုတောင်းရမည်၊ အစီအစဉ်ချရ မည်။ ကျွန်တော်တို့သည် မှားယွင်းကောင်း မှားယွင်းနိုင်သည်။ သို့သော် ထိုအရာအတွက် ရင်ဆိုင်လာရမည့် ပြသနာအသီးသီးကို ပြင်ဆင်ထားကြရမည်။ ကာလက်သည် ဟေဗြုန်မြေ ကို ရယူရန် လွန်ခဲ့သော (၄၅) နှစ်က စိတ်နှလုံးတွင် ရှိခဲ့သော်လည်း ထိုအချိန်က ဖြစ်မလာ ခဲ့။ ယခုတစ်ဖန် ကြိုးစားရယူရန် ထပ်မံခွန်အားမွေး ပြင်ဆင်ရသည်။ သင့်အသက်တာတွင် သင်၏ရူပါရူံအိပ်မက်များကို လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖော်ရန် တစ်ခါတည်း အဆင် ပြေ အောင်မြင်ချင်မှ အောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။ စိတ်ဓါတ်ကျ အားလျော့ သွားခြင်း မဖြစ်ပါနှင့်။ ဘုရားသခင်က သင့်ကို နောက်တစ်ကြိမ်အတွက် ခွန် အားများဖြင့် ပတ်ရစ်ပါလိမ့်မည်။
(၃) ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆန္ဒတွေကို အောင်မြင်ရသောအခွင့်ကို ပေးလိမ့်မည်။
နောက်ဆုံး ပြောချင်တာကတော့ အခန်းငယ် (၁၂) မှာ ယောရှုက ပြောခဲ့တာကို ကြည့်ပါ။
“ဤတောင်ကို ကျွန်ုပ်အားပေး ပါ။ ဤတောင်ပေါ်မှာ အာနက လူရှိကြောင်းကို၎င်း၊ ထို့နေ့၌ ကိုယ်တော် ကြားရပြီ။ သို့ရာတွင် ထာဝရဘုရားသည် အကျွန်ုပ်နှင့်အတူ ရှိတော်မူလျှင် အ မိန့်တော်ရှိသည် အတိုင်း ထိုသူတို့ကို နှင်ထုပ်ခြင်းငှါ အကျွန်ုပ်တတ် စွမ်းနိုင်ပါသည်ဟု လျှောက်ဆို၏။” (ယောရှု ၁၄း၁၂)
ကျွန်တော်တို့သည် လူ့ဘီလူကြီးများကို မသတ်နိုင်ပါ။ ဘုရားသခင်ကသာ အကူအညီ ပေး မည် ဖြစ်ပါသည်။
ဘုရားသခင်သည် မောရှည်ကို ဣသရေလလူများအား ကယ်တင်နိုင်ရန် ကူညီခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်သည် ဂိဒေါင်ကို လူ (၃၀၀) ဖြင့် ရန်သူ မိဒါန်များကို တံပိုးမှုတ်ပြီး တိုက်နိုင်ရန် အကူအညီ ပေးခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်သည် ဒါဝိတ်ကလေးနှင့် အတူပါရှိကာ ကျောက်ခဲလုံးလေးများဖြင့် ဂေါလျက် ကြီးကို အနိုင်ယူ ပေးလိုက်သည်။
ဘုရားသခင်သည် တမန်တော်များနှင့် အတူပါရှိပြီး ကယ်တင်ခြင်း သတင်းကောင်းကို ရော မ အင်ပါယာ ကြီးတစ်ခုလုံးတွင် ပြန့်နှံ့သွားစေရန် လုပ်ဆောင် ကူညီပေး လိုက်တယ်။
ကျွန်တော်တို့သည် ယနေ့ ကျွန်တော်တို့တွင် ရှိနေသည့် အိပ်မက် ရူပါရုံများအတွက် ဘုရားသခင်က ကူညီ မစမည်ကို သံသယ ကင်းမဲ့စွာ ယုံကြည်ထားပါသည်။ လုပ်ဆောင်ရ မည့် အလုပ်များအတွက် ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားအားထုပ်ဘို့ လိုအပ်လာသည့် အခါတိုင်း ကိုယ်တော်က ပြောမည်မှာ “မင်းတစ်ယောက်ထဲ မသွားစေ ချင်ပါဘူး။ မင်းနဲ့ အတူငါ သွား မယ်။ မင်းရဲ့ အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ပေါ်ဘို့ ငါလည်းကူညီမယ်” ပြောပါ လိမ့် မည်။
သင်၏ ရူပါရုံများ၊ လုပ်ဆောင်လိုသည့်အရာများ၊ အခက်အခဲများ မည်မျှကြီးမားသည် ဖြစ် စေ ဘုရားသခင် ကတော့ သင်ကို ဘယ်သောအခါမျှ ရှုံးစေမည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏ အိပ်မက် ရူပါရုံများ အောင်မြင်လာစေရန် ကူညီမစခြင်းဖြင့် အောင်မြင်ခြင်းကို ရယူခံ စားနိုင်ပါလိမ့် မည်။
ရေးသားတင်ပြသူ Unknown at 5:53 PM Links to this post
ယုံကြည်သူတိုင် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သော ကျမ်းပိုဒ် အချို့ရှိကြပါသည်။ လူအများ ကြိုက်နှစ်သက် သည့် ကျမ်းပိုဒ် များသည် တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် မတူညီ ကွဲပြား ခြားနား ကြသော်လည်း ဆာလံ (၂၃) ကျမ်းပိုဒ်များမှာမူ အကြိုက်တူညီကြပါသည်။ မိမိ ခွန်အား ရရှိသလို အဓိပ္ပါယ် အမျိုးမျိုး ဖွင့်ဆိုကာ ကျေနပ်မှု အပြည့်ဖြင့် ဖတ်ရှုကာ ဝမ်းမြောက်ခြင်း ခံစားနေကြပါသည်။ ထိုအကြောင်း အရာကို အနည်းငယ် ဝေငှ လိုပါသည်။
ထာဝရဘုရားသည် ငါ၏သိုးထိန်းဖြစ်တော်မူ၏။ (ဆာလံ ၂၃း၁)
ဆာလံ (၂၃)ကို ကျွန်တော်တို့ အလွန် ရင်းနှီး ကျွမ်းဝင်နေသော စကားလုံးဖြင့် အစပြု ထားသည်ကို တွေ့ရမည် ဖြစ်သည်။ “ထာဝရ ဘုရားသည် ငါ၏သိုးထိန်း ဖြစ်တော်မူ၏။ ငါ၌ ဆင်းရဲမခံရ” တစ်စုံတစ် ယောက်က “ငါ၌ ဆင်းရဲမခံရ” ဟူသော စကားလုံးကို အမှတ်တမဲ့ ကြားရပါက ဂရုတစိုက် ပြန်လည် တုန့်ပြန် ကြမည် ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ကျွန်တော်တို့သည် ဆင်းရဲခက်ခဲလွန်းတဲ့ အခြေ အနေ မျိုးတွင် ရှိနေကြသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
လူတိုင်း အားရ ကျေနပ်နိုင်သော အခြေအနေမျိုးကို တစ်ခါမျှ မရနိုင်ခဲ့ပါ။ အဖြူရလျှင် အမည်ရောင် လိုချင်ကြ သည်။ အကြီးရလျှင် အသေးလိုချင်ကြသည်။ ထိုနောက်တွင်ကား မပြည့်စုံနိုင်သော အလိုဆန္ဒ များကြောင့် အစဉ်အော်ဟစ် တောင်းဆို နေကြသည်မှာ ကျန်းမာခြင်း၊ ကား၊ တိုက်၊ အစရှိသဖြင့် မိမိလိုချင် သော အရာများကို နေ့စဉ်တောင်ဆို နေကြတော့သည်။
ထိုသို့ ငါဆိုသော်၊ ကိုယ်တိုင် ဆင်းရဲခြင်းကို ရည်မှတ်၍ ဆိုသည်မဟုတ်။ အကြောင်းမူကား၊ ငါသည် တွေ့ကြုံ သမျှသော အခြင်းအရာတို့၌ ရောင့်ရဲသော စိတ်ရှိ အံ့သောငှါ သင်မိပြီ။ ရှုတ်ချခြင်း ကိုလည်း ကောင်း၊ ကြွယ်ဝခြင်းကို လည်းကောင်း ခံတတ်၏။ ဝစွာစားခြင်း၊ မွတ်သိတ်ခြင်း၊ စည်းစိမ်ရှိခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်းတို့ကို ခံရအံ့သောငှါ အရပ်ရပ်တို့တွင် အရာရာ၌ သင်မိပြီ။ (ဖိ ၄း၁၁-၁၂)
ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့ကို ပျော်ရွှင်ကျေနပ်မှုများဖြင့် အသက်ရှင်ရန် အလိုတော် ရှိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် မနာလိုမှုများ ဂနာမငြိမ်မှုများဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့တွင် မရှိသော အရာများ အတွက် ခံစားဝမ်း နည်းမှုများဖြင့် အသက်ရှင်ရန် မသင့်လျော်ပါ။ကျွန်တော်တို့သည် ကိုယ်တော်နှင့် ဆိုင်သောသူများ ဖြစ်သော ကြောင့် ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းခြင်းယဇ်များကို ပူဇော်တတ်သော နှလုံးသားများဖြင့် အသက်ရှင် သင့်ပါသည်။
ကျွန်တော် တို့သည် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရမည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ကျွန်တော်တို့ လိုအပ်နေသော အရာများကို သိုးထိန်း ကောင်းကြီးက ပေးအပ်နေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ကျမ်းစာအုပ် ထဲတွင် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ လူသားများကို သိုးအုပ်စု (သို့) သိုးလေး တစ်ကောင်အဖြစ် အမြဲ တစ်စေ နှိုင်းယှဉ် ဖေါ်ပြခဲ့သည်။ သိုးဆိုသော သတ္တဝါမှာ အလွန် လှပပါသည်။ သို့သော် ထိုသတ္တဝါမှ
ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြား အာရုံ ချို့တဲ့နေသော သတ္တဝါ တစ်ကောင်မျှသာ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဟေရှာယက ပြောခဲ့သည်မှာ
“ငါတို့ ရှိသမျှသည် သိုးကဲ့သို့လမ်းလျက် ကိုယ့်လမ်းသို့ အသီးသီး လိုက်သွား ကြသည်ဖြစ်၍ ထာဝရဘုရားသည် ခပ်သိမ်းသောငါတို့၏ အပြစ်များကို သူအပေါ်၌ တင်တော်မူ၏။ (ဟေရှာ ၅၃း၆)
ငါတို့ရှိသမျှ ဆိုသည်မှာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူသားအားလုံးကို ဆိုလိုပါသည်။ သခင်ယေရှုသည် ခရစ်ဝင်ကျမ်း များတွင် နောက်တော်တွင် လိုက်နေသော လူအုပ်ကြီးကို ရှုမြင် သုံးသပ်ရာတွင် “အထိန်းမရှိသော သိုးများဟု” ရည်ညွှန်း ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြောင်း ခရစ်ဝင်ကျမ်း ရေးသားသူက မှတ်တမ်းတင် ထားသည်။ ထိုဝေါ ဟာရကို အသုံးပြု ထားရာတွင် တစ်စုံတစ်ရာ တင်စားထားခြင်း မဟုတ်ဘဲ အကူအညီ မဲ့နေသောသူ၊ အထီးကျန် ဆန်သောသူဟူ၍ ပြောဆို လိုခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
သိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းကြီးကို အကြီးအကျယ် လုပ်ခဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်သော Philip Keller ဆိုသူသည် "A shepherd Looks at the Twenty third Psalm" “သိုးထိန်းတစ်ယောက် ဆာလံ(၂၃)ကို လေ့လာခြင်း” ဟူသော စာအုပ်တွင် ရေးသား ထားသည်မှာ သိုးမွေးမြူရေး ဆိုသည်မှာ အခြား လုပ်ငန်းများထက် ပိုမို ဂရုစိုက် လုပ်ဆောင်ရကြောင်း၊ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော ထိုသတ္တဝါသည် သူတို့ကိုယ် သူတို့ ဂရုမစိုက် သောကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ရေးသား ဖေါ်ပြထားသည်။
သိုးများ၏ အမြင် အာရုံမှာ အားနည်းပါသည်။ အလွန် ခေါင်းမာသည်။ သို့သော် အလွန် စိုးရိမ် တတ်သည်။ အုပ်စုလိုက် နေထိုင်ပါက ကမူရှူးထိုး ရောက်တတ်ရာရာ တစ်ကောင်တစ်နေရာ အစဉ်ပြေသလို ပြေးတတ်သည်။ သူတို့တွင် မိမိကိုယ်ကို မည်ကဲ့သို့ ကာကွယ် ရမည်ဟူ၍ နည်းစနစ် မရှိချေ။ သူတို့သည် ကြောက်တတ် ကြသည်။ သူတို့သည် အားနည်းသော သဘော သဘာဝ ရှိသည်။ သူတို့ကို ကာကွယ် ပေးမည့် သိုးထိန်းမရှိလျှင် ထွက်ပြေးဘို့ နည်းလမ်း တစ်ခုတည်းသာ သိသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ပြဿနာ တစ်စုံတစ်ရာ တွေ့ကြုံရပြီဆိုပါက ကမူရှူးထိုး မိမိ ထင်မြင်ချက် အတိုင်း မှားသည် မှန်သည်ကို မစဉ်းစားဘဲ ဖြေရှင်း တတ်ကြသည် မဟုတ်ပါလား။
သိုးတစ်ကောင်သည် မိမိ၏ အိမ်ပြန်လမ်းကို မည်ကဲ့သို့ ရှာဖွေ ရမည်ကို သိမြင်ခံစားနိုင်သည့် အာရုံခံ စားမှုမျိုး မပါရှိချေ။ ခွေး၊ မြင်း၊ ကြောင်၊ ငှက် စသည်တို့သည် မိမိတို့ နေရာအရပ်ကို မည်ကဲ့သို့ ပြန်ရမည်ကို သိရှိပြီး သားဖြစ်သည်။ သိုးတစ်ကောင် အဘို့ လမ်းလွှဲပြီ ဆိုလျှင် မည်သို့မျှ အသက်ရှင် ရပ်တည်ရန် မဖြစ်နိုင် တော့ချေ။
သိုးတစ်ကောင်ပျောက်လျှင် ကိုးဆယ်ကိုးကောင်သောသိုးတို့ကို တောတွင်ထားခဲ့ပြီးမှ ပျောက် သောသိုး တစ်ကောင်ကို မတွေ့မှီတိုင်အောင်သွား၍ မရှာဘဲနေမည်လော။ (လု ၁၅း၎)
ထို့ကြောင့် ဆာလံ (၂၃)၏ အခြေခံအရင်းအမြစ်ကို လေ့လာဆန်းဆစ်ကြည့်ရာတွင် သိုးထိန်း မပါဘဲနှင့် ပြည့်စုံလုံလောက်သော အခြေအနေကို ရရှိခံစားနိုင်သည်မှာ မဖြစ်နိုင်ပါချေ။
ဆာလံဆရာ ဒါဝိတ်ကိုယ်တိုင်က “ထာဝရဘုရားသည် ငါ၏သိုးထိန်းဖြစ်တော်မူ၏။ ငါ၌ ဆင်းရဲမခံရ” ဟူ၍ ရေးသားစပ်ဆို ထားသည်မှာ အံ့သြစရာတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါ။ အသက်တာအတွက် ဆင်ခြင်စရာ တစ်ခုသာလျှင် ဖြစ်ပါ သည်။ ဆက်လက်၍ “စိမ်းလန်သော ကျက်စားရာအရပ်၌ ငါ့ကို အိပ်စေတော်မူ၏” ဟူ၍ ရေးသားထား ပါသည်။ ဤနေရာတွင် သိုးတစ်ကောင်၏ ပုံရိပ်ကို အပြည့်အဝ ယူဆောင်ထားပြီး ကျေနပ်စရာ အနေ အထားတစ်ခုကို ညွှန်ပြနေပါသည်။ သိုးတစ်ကောင်အတွက် အရေးကြီးဆုံးအရာမှာ စိမ်းလန်းသော ကျက် စား ရာအရပ်ကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားပါလျှင် အားလုံးသည် ပြည့်စုံ လုံလောက် သွားသည်ဟူ၍ ယေဘူယျ အားဖြင့် ဆိုနိုင်သည် မဟုတ်ပါလော။ ထိုနေရာတွင် အိပ်စက် ပျော်မွေ့နိုင် သည်ဟု ဆိုထားသည် မဟုတ်ပါလား။
ဤနေရာတွင် စကားလုံးတစ်လုံးမှာ “ငါ့ကို အိပ်စေတော်မူ၏” ဟူသော စကားမှာ ကျွန်တော်တို့ အတွက် သတိထားရမည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ဘုရားသခင်က ခွန်အားနှင့် အိပ်ခိုင်းသောအချိန် ရှိနေတတ်သည်။
ကျွန်တော်တို့သည် တစ်ခါတစ်ရံ ကျွန်တော်တို့၏စိတ်နှင့် အမူအကျင့်များနှင့်အညီ ရပ်နားသင့်သည့် အခါများတွင် ရပ်တန့်ခြင်းမရှိ ကြိုက်သလို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတတ်သည်။ ထိုအခါမျိုးတွင် ဘုရားသခင်၏ အသံကို ကြားနာတတ်ရန် အရေးကြီးသည် မဟုတ်ပါလား။ တစ်ခါတစ်ရံတော့ ဘုရား သခင်က “မင်းအိပ်ဘို့ လိုနေသည်” ဟု ပြောဆိုသည့်အခါမျိုးလည်း ရှိနေတတ်ပါသည်။ ထိုအချိန်မျိုး တွင် ကျွန်တော်တို့သည် မည်သည့် အခြေအနေမျိုးတွင် ရှိနေသည် ဖြစ်စေ ဘုရားစကားကို နားထောင်ရ မည်သာဖြစ်သည်။
Keller ကပြောသည်မှာ သိုးတစ်ကောင် အိပ်စက်နိုင်ရန် အောက်ပါ အချက် (၄)ချက် လိုအပ်ပါသည်။
1. ပထမ အစာဝအောင် စားထားသည့်အချိန်မျိုးတွင် အိပ်ပျော်တတ်ပါသည်။
2. ဒုတိယအနေဖြင့် မကြောက်တတ်သောအချိန်များတွင် အိပ်ပျော်တတ်ပါသည်။
3. တတိယအနေဖြင့် တင်းတိမ်ရောင့်ရဲသောအခါများတွင် အိပ်ပျော်တတ်ပါသည်။
4. သိုးအုပ်အတွင်း၌ ညီညွှတ်မှု ရှိနေသောအခါများတွင် အိပ်ပျော်တတ်ပါသည်။
နှုတ်ခပတ်တော်သည် သင့်၏အသက်တာကို ဝပြောစေလိမ့်မည်။ ကြောက်ရွံ့ခြင်း ကင်းစေလိမ့်မည်။ ကျေနပ်ရောင့်ရဲစေလိမ့်မည်။ သင်တို့၏ ပတ်ဝန်ကျင်၊ အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ညီညွှတ်စေလိမ့်မည်။
ဒါဝိတ်က ဆက်လက်၍ “ငါ့ကိုသာယာသော မြစ်နားသို့ ပို့ဆောင်တော်မူ၏” ဟူ၍ ရေးသားထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သိုးများကို ရေရှိရာ ရေစပ်နားသို့ မောင်းထုပ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့သည် ရေမကူး တတ်ပါ။ သိုးများသည် ရွံ့လူးသော သတ္တဝါများ မဟုတ်ကြသော်လည်း ကမ်းနားတွင် ရွံ့အိုင်များထဲတွင် သူတို့၏ ထူထဲသော အမွေးပွကြီးများဖြင့် မရုန်းနိုင် မထွက်နိုင် သောအခါများ ရှိနိုင်သည်။ ထိုအခါများတွင် ကူညီပေးတတ်ကြပါသည်။
တစ်ခါတစ်ရံတွင် ကျွန်တော်တို့သည် လောကအရာများထဲတွင် မရုန်းနိုင် မကန်နိုင်သောအခါများ ရှိနေလျှင်လည်း ကျွန်တော်တို့ကို မနစ်မြုတ် မပြောင်းလဲနိုင်ရန် အကူအညီပေးတတ်ပါသည်။ ဘုရားသခင် သည် ကျွန်တော်တို့၏ အားနည်းချက်များကို သိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ကို သာယာသော မြစ်နားသို့ ပို့ဆောင်တတ် ပါသည်။ လောက၏ စုံစမ်းခြင်းများထဲမှ မရုန်းထွက်နိုင်သောအခါ ကျွန်တော်တို့အတွက် ထားရှိသော ကတိတော်များဖြင့် အကူအညီပေးလေ့ရှိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ရုန်းထွက်ရန် ခက်ခဲနေသော အခါများတွင်လည်း နားလည်မှုအပြည့်ဖြင့် ကွယ်ကာ လမ်းပြတတ်ပါသည်။
လူ၌ဖြစ်တတ်သော စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကိုသာ သင်တို့သည် ခံရကြ၏။ သင်တို့မခံနိုင်သော စုံစမ်း နှောက် ယှက်ခြင်းကို သင်တို့၌ ရောက်စိမ့်သောငှါ အခွင့်ပေးတော်မမူ။ သင်တို့သည် ခံနိုင်မည် အကြောင်း စုံစမ်းနှောက် ယှက်ခြင်းအရာနှင့်တကွ ထွက်မြောက်သောလမ်းကိုလည်း စီရင်ပြုပြင်တော် မူလိမ့်မည်။ (၁ကော ၁၀း၁၃)
ဘုရားသခင်သည် သစ္စာနှင့် ပြည့်စုံသော ဘုရားဖြစ်ပါသည်။ သူသည် ကျွန်တော်တို့ အသက်တာတွင် စုံစမ်းသွေးဆောင်မှုထဲ ကျဆင်းသွားသောအခါ ထိုနေရာမှာတင် မထနိုင်တော့သည့်အခြေအနေမျိုးတွင် ထားရှိ ခြင်းမပြုပါ။ ထွက်မြောက်နိုင်သောလမ်းကိုလည်း စီရင်ပြုပြင်ပြီးသားဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်တော်တို့ကို ဂရုစိုက်နေသော ဘုရားဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့အတွက် ထွက်မြောက်ရာလမ်းကို ပြုပြင် လုပ်ဆောင်ပေး ချင်သောဘုရားသခင် ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ကိုယ်တော်ကို တွေ့သင့်သော အချိန်ကာလ၌ သန့်ရှင်းသူ အပေါင်းတို့သည် ရှေ့တော်၌ တောင်း လျှောက်ပါလိမ့်မည့်။ အကယ်စင်စစ် လွှမ်းမိုးတတ်သော ရေကြီးသည် သူတို့ထံသို့ မချဉ်း ရပါ။ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ခိုလှုံရာ ဖြစ်တော်မူ၏ အကျွန်ုပ်ကို တွေ့သင့်သော အချိန်ကာလ၌ သန့်ရှင်းသူ အပေါင်းတို့သည် ရှေ့တော်၌ တောင်းလျှောက်ကြပါလိမ့်မည်။ အကယ်စင်စစ် လွှမ်းမိုးတတ်သော ရေကြီးသည် သူတို့ထံသို့ မချဉ်းရပါ။ (ဆာလံ ၃၂း၆-၇)
ဒါဝိတ်က ဆက်လက်၍ ပြောကြားခဲ့သည်မှာ “အကျွန်ုပ်၏ ဝိညာဉ်ကို အားဖြည့်၍” ဟူသော စကား စုကို မြင်တွေ့ရပါသည်။ ပျောက်သောသိုးတစ်ကောင်သည် အိမ်သို့ မပြန်တတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် သိုးထိန်းသည် ပျောက်နေသောသိုးကို ပြန်လည်ရှာဖွေကာ ပြန်လည် သိမ်းဆည်းတတ်ပါသည်။
သင်သည် ကားတိုင်လမ်းသို့ ပြန်မလာတတ်ဘဲ ပျောက်ဆုံးနေပါက သင်၏အိမ်ကို ပြန်လည်တွေ့ရှိခွင့် ပေးပါ လိမ့်မည်။ သင်သည် အိမ်ပြန်ရသောအခွင့်ကို ဘုရားသခင်က ရှာဖွေပေးပါလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင် ထံသို့ ပြန်လာပါ။ ကားတိုင်လမ်းကို ပြန်လာခဲ့ပါ။ သင်၏ ဝိညာဉ်ကို ခွန်အားနှင့် ပြည့်ဝသော ယုံကြည်သူတစ် ယောက်ဖြစ်ရန်၊ ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်မှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရရန် သခင်ယေရှုသည် သင့်ကို ကားတိုင်တ ရားတော်အားဖြင့် ရွှေးနှုတ်ကယ်တင်ခဲ့သည်ကို သတိရပါ။ ကျွန်တော်တို့၏ အသက်ဝိညာဉ်ကို ကယ်တင်ရန် ကားတိုင်ထက်တွင် သခင်ယေရှု အသက်ပေးဆပ်ခဲ့သည်ကို သတိရပါ။
အချုပ်အားဖြင့် ဆိုရသော် သိုးထိန်သည် သိုးတစ်ကောင်ချင်းစီအတွက် အရေးပါသော အနေအထား တွင် ရှိနေသကဲ့သို့ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းသည်လည်း ဘုရားသခင်နှင့် ဆက်နွယ်ပတ်သတ်ရာတွင် အလွန်အရေးကြီးသော အခြေအနေတွင် ရှိနေပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင့်အသက် တာတွင် ဘုရားသခင်ကို မျှော်လင့် အားကိုးတတ်ခြင်း မရှိသေးပါက သင့်အသက်တာအတွက် အလွန် ကြီးမားသော ပြဿနာကို ဖိတ်ခေါ်နေသကဲ့သို့ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်နှင့် အသက်ရှင် သွားလာ တတ်စေရန် ဝေငှတိုက်တွန်းလိုက်ရပါသည်။ (အာမင်)
ရေးသားတင်ပြသူ Unknown at 5:42 PM Links to this post
ရေးသားတင်ပြသူ Unknown at 6:57 PM Links to this post